Global Voices teny Malagasy » Inona no olana telo volana taorian’ny fihetsiketsehana manohitra ny governemanta tany Bolgaria? · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 28 Oktobra 2020 5:09 GMT 1	 · Mpanoratra Veni Kojouharova Nandika Liva Andriamanantena
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Bolgaria, Fanoherana, Fitantanam-pitondrana, Mediam-bahoaka, Politika, Tantara
Fihetsiketsehana manoloana ny Parlemanta tao Sofia, Bolgaria ny 15 Jolay 2020. Saripikan'i Veni Kojouharova, nahazoana alàlana.
Naresaka kokoa noho ny mahazatra tamin'ity fahavaratra ity ny hariva tao amin'ny Kianjan'ny Fahaleovantenan'i Sofia. Vahoaka marobe no nivory teo amin'ity toerana ity manoloana ny parlemanta nanomboka ny voalohan'ny volana Jolay. “Ostavka,” hoy izy ireo nihirahira izay midika hoe “miala” amin'ny teny Bolgara.
Nanomboka ny hatezerana rehefa nanao ny morondranomasina ho an'ny daholobe ho fananany manokana ilay mpanao politika malaza iray ka niteraka fihetsiketsehana manerana ny firenena nitaky ny fanavaozana tanteraka  ny rafitra politika izay heverina ho lò sy tsy mahomby.
Io no famoriam-bahoaka lehibe indrindra hita tany Bolgaria tao anatin'ny folo taona lasa izay – tany Sofia, ary nahasarika olona miisa 30.000 tamin'izay fotoana izay, araka ny tombatombana isankarazany . Nisy ihany koa ny hetsi-panoherana madinika kokoa nitranga tany amin'ireo tanàndehibe Bolgara hafa  sy tany ivelany.  Nampiseho ny valim -panadihadiana iray nataon'ny Sova Haris , orinasam-panadihadiana tsy miankina fa ny 70 isanjaton'ny  olona miisa 1.000 izay nohadihadiana no nanohana ny fanoherana.
Nanomboka ny 7 jolay izany rehetra izany, rehefa nikasa hanangana sainam-pirenena tao Rosenec, morontsiraka misy zaridainan'ny daholobe iray ny mpitarika ny antoko mpanohitra Yes Bulgaria, Hristo Ivanov . Raha araka ny lalàna, tokony ho azon'ny Bolgara rehetra hidirana ny zaridainam-panjakana, ary notsapain'i Ivanov raha mbola manan-kery ny zony ao Rosenec.
Raha nandefa mivantana  ny fitondrany ny sainam-pirenena tao amin'ny tambajotra sosialy izy dia nanatona ny morondranomasina tamin'ny alàlan'ny sambo, satria tsy nisy lalana misokatra mifandray amin'ilay faritra. Nanatona azy ny mpiambina raha vantany vao nanitsaka ilay morondranomasina izy. Natosik'izy ireo tao anaty rano i Ivanov rehefa avy nifamaly izy ireo.
Nanao fisafoana ny tranon'i Ahmed Dogan, ilay mpitarika hajaina ny Hetsika ho an'ny Zon'olombelona sy ny Fahalalahana  (MRF), antoko politika misolo tena ny Tiorka vitsy an'isa ao Bolgaria ny mpiambina.
Mpiambina tao amin'ny sampandraharahan'ny fiarovam-pirenena teo aloha  nandritra ny fotoana komonista, mbola olo-malaza amin'ny politika Bolgara ka hatramin'izao fotoana i Doğan. Hita fa mpiara-dia akaiky amin'ny Praiminisitra Boyko Borisov izy, ary miantso azy  hoe “marary aotra amin'ny tsifisian-dalàna ao Bolgaria” i Hristov.
Taty aoriana, nambara fa mpitandro ny filaminana ihany koa ireo mpiambina, ary ny volan'ny mpandoa hetra no handoavana ny karamany.
Ity ambany ity ny ampahany fohy tamin'ny fidiran'i Ivanov mivantana:
Lasa nantsoin'ny fampitam-baovao hoe “Dogan's Saray” (saray na “lapa” amin'ny teny Tiorka) ny raharaha ary azo heverina fa niharan'ny hatezeram-bahoaka. Saingy tahaka ireo tantara ratsy hafa talohan'izany dia nanaraka mora foana ny tsingerina izay efa mahazatra ireo Bolgara ny raharaha saray: nibahana ny lohatenim-baovao nandritra ny tapa-bolana izany talohan'ny nanjavonany tanteraka. Tamin'ity indray mitoraka ity, na izany aza, samihafa ny fandehan'ny raharaha.
Nivadika ny toe-draharaha rehefa nanome baiko hanaovana bemidina ny biraon'ny filoham-pirenena ny Lehiben'ny Fampanoavana Ivan Geshev izay heverina fa valifaty noho ny tenin'ny filoha Rumen Radev nanameloka ny fibodoana manokana ny morondranomasina Rosenec. Fantatra fa mpiara-dia akaiky amin'i Dogan  i Geshev, raha mpitsikera ampahibemaso  ny governemanta kosa i Radev, avy amin'ny antoko mpanohitra Sosialista Bolgara (BSP).
Ora telo taorian'ny nidiran'ny olon'i Geshev tao amin'ny biraon'ny filoha dia nivoaka tao amin'ny Kianjan'ny Fahaleovan-tena ny vahoaka izay voalohany tamin'ireo andiana fihetsiketsehana.
Ho an'ny Bolgara maro, tsy voatery manohana an'i Radev ny fihetsiketsehana, fa ho an'ny andrim-panjakana demokratika sy ny tamberina andraikitra. Natao hanoherana an'i Borisov sy Geshev ny hirahira, nefa koa hitakiana ny fanavaozana ara-pitsarana sy ny fanasarahana mazava ny fahefana.
Nisioka ny iray tamin'ireo fihetsiketsehana i Dimitar Bechev, mpikaroka ao amin'ny Oniversite Carolina Avaratra sady mpandray anjara matetika ao amin'ny Al Jazeera, CNN, Foreign Policy ary OpenDemocracy:
“Tsy mila BSP izahay, tsy mila GERB. Mila fanovana izahay.” Natao hanoherana ny antoko mpitondra afovoany-ankavanana sy ny mpanohitra Sosialista ny hetsika.
Naneho hevitra ihany koa i Antoaneta Dimitrova, mpahay siansa ara-politika ao amin'ny Oniversiten'i Leiden:
Mitohy ny hetsi-panoherana any Bolgaria. Ho an'ny toe-draharaha, tsy vao sambany izao ny olona no nanohitra ny fitsabaham-pahefana ataon'ny vitsy an'isa mpanankarena mampiasa sy mifehy ireo andrim-panjakana hahazoana tombontsoa manokana. Maha-velom-panantenana ny mpanao fihetsiketsehana, tanora maro, mahatakatra fa tsy izany no atao hoe demokrasia, saingy 1 /
Tamin'ny taona 2013, nipoaka ny hetsi-panoherana nanerana an'i Bolgaria taorian'ny resabe tamin'ny fanendrena an'i Delyan Peevski  ho lasa lehiben'ny Masoivohon'ny Fiarovam-panjakana. Nofoanana ny fanendrena an'i Peevski taty aoriana, saingy mbola malaza ho manan-danja izy teo amin'ny fampitam-baovao . Voalaza fa manana rohy mifandray amin'ny mafia Bolgara  izy izay lalipaka  amin'ireo andrim-panjakana Bolgara.
Tamin'izany fotoana izany, very hevitra ireo mpanao fihetsiketsehana; nosoloina governemanta iray hafa ihany ny governemanta mpanao kolikoly tamin'ny farany. Rehefa avy nandray io lesona sarotra io dia nitaky mihoatra ny fametraham-pialan'ny tsirairay avy ny mpanohitra tamin'ity indray mitoraka ity. Nefa ho hita eo ihany raha ho avy ny tena fanovana.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2020/10/28/150094/
 fanavaozana tanteraka: https://bnr.bg/radiobulgaria/post/101313484/pisna-ni-laitmotiv-na-protestite-v-balgaria
 tombatombana isankarazany: https://www.mediapool.bg/thousands-march-in-eighth-day-of-nation-wide-antigovernment-protests-in-bulgaria-news309930.html
 tanàndehibe Bolgara hafa: https://www.svobodnaevropa.bg/a/30727562.html
 tany ivelany.: https://www.dw.com/bg/%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BC-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%B2-12-%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D1%85%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82/a-54410592https://www.dw.com/bg/%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BC-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%B2-12-%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D1%85%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82/a-54410592
 70 isanjaton'ny: https://www.mediapool.bg/sova-haris-parvi-po-reiting-sa-prezidentat-radev-i-partiyata-na-slavi-trifonov-news311534.html
 nandefa mivantana: https://www.youtube.com/watch?v=BLWaKmz4COI
 Hetsika ho an'ny Zon'olombelona sy ny Fahalalahana: https://en.wikipedia.org/wiki/Movement_for_Rights_and_Freedoms
 Mpiambina tao amin'ny sampandraharahan'ny fiarovam-pirenena teo aloha: https://agentibg.com/index.php/bg/a-bg/127-2014-03-08-09-27-14
 miantso azy: https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2020/08/04/4098846_hristo_ivanov_dps_e_nuleviiat_pacient_na_bulgarskata/
 mpiara-dia akaiky amin'i Dogan: https://bivol.bg/geshev-nedosegaemite.html
 mpitsikera ampahibemaso: https://www.reuters.com/article/us-bulgaria-protests-justice-idUSKBN24A2ZR
 resabe tamin'ny fanendrena an'i Delyan Peevski: https://uk.reuters.com/article/uk-bulgaria-government/bulgarians-protests-over-media-magnate-as-security-chief-idUKBRE95D0MK20130614
 malaza ho manan-danja izy teo amin'ny fampitam-baovao: https://globalvoices.org/2017/06/27/satirical-cartoonists-take-aim-at-bulgarias-media-distribution-monopoly/
 manana rohy mifandray amin'ny mafia Bolgara: https://balkanbusinesswire.com/stories/511082246-corporate-raiders-bulgarian-mafia-and-corrupt-media-mogul-sack-the-country-s-most-successful-bank